डा. केसीकाे समर्थनमा रेजिडेन्ट चिकित्सक अनसनमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ८, २०७५ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — चिकत्सा शिक्षा सुधारकाे माग गर्दै २५ दिन देखि अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन (एनआरडीए) ले मंगलबार देखि सामुहिक अनसन सुरु गरेकाे छ ।
त्रिभुवन बिश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुले मंगलबार बिहान १० बजे देखि अनसन सुरु गरेका हुन्।
डा. केसीका माग सम्बाेधननभएसम्म हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि साझ ५ बजेसम्म अनसन जारी रहने नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसियसन त्रिबि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष सुमति पाण्डेले बताए।
महाराजञ्जमा अहिले १ सय जना चिकित्सक अनसनमा बसिरहेकाे डा. पाण्डेले बताए। बीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सकहरु पनि अनसनमा बस्ने सहमति भएको पाण्डेले बताए।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ १०:३३
पुल नहुँदाको पीडा : सदरमुकाम जान समस्या
श्रावण ८, २०७५ वसन्तप्रताप सिंह
बझाङ — बाहुलीगाढको बाढीले बगाएको झोलुंगे पुल अझै निर्माण नहुँदा स्थानीयलाई सदरमुकाम आउजाउमा सकस भएको छ । जिल्लाका दक्षिण–पश्चिमी भेगका अधिकांश गाउँपालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्ने उक्त पुल दुई वर्षअघिको बाढीले बगाएको थियो ।
पुल बगाएपछि हिँडेर स्कुल जाँदै गरेका स्कुले नानीहरू र पुल निर्माण हुने आयोजनास्थल । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह
सोही ठाउँमा हालिएको काठेसाँघु पनि असार अन्तिम साताको बाढीले बगाएपछि समस्या थपिएको छ ।
रिठापाटा र सुबेडाका बालबालिकालाई विद्यालय जान कठिनाइ भएको छ । पुल हुँदा १० मिनेटमै सदरमुकाम पुग्ने बालबालिका अहिले आधा घण्टाको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
पुल बगाएपछि सुबेडा, सिमखेत, नौरा, देबल र रिठापाटालगायत क्षेत्रका बालबालिकालाई निकै मुस्किल भएको देबलका स्थानीय प्रवीन्द्र धामीले बताए । जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम आउने यात्रु झन्डै ३ किलोमिटरमाथिबाट घुमेर आउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । ‘खोलामा पुल हँुदा चैनपुर पुग्न सजिलो थियो । केटाकेटी आफैं हिंडेर स्कुल जान्थे,’ सुबेडाकी रूपा जोशीले भनिन्, ‘अहिले घरका सबै काम छाडेर बच्चालाई स्कुल छोड्न र लिन जानुपर्छ । दिनको ४ घण्टा बच्चाकै लागि खर्च गर्नुपर्दा घरको काम चौपट भएको छ ।’
पहिला २० मिनेट जतिमा सदरमुकाम पुगिने उनको गाउँबाट अहिले झन्डै एक घण्टा हिंड्नुपर्छ । विद्यालयमा समयमै नपुग्दा पढाइ नै छुट्ने गरेको छ । गाडी गुड्ने सडक भएकाले नानीहरूलाई एक्लै विद्यालय पठाउन नसकिएको अभिभावक कमला बुढाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सडकमा गाडी ओहोर दोहोर गरिरहन्छन् । पहिले पो गाडी नगुड्ने भएर ढुक्क भएर पठाउँथ्यौं । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । काम छाडेरै भए पनि नानीहरूलाई स्कुलसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।’
झोलुंगे पुल हुँदा विद्यालय समयभन्दा १५/२० मिनेट अगाडि नै विद्यालय पुग्ने नानीहरू अहिले प्राय जसो ढिलो गरी आउने गरेको शिक्षकले बताए । सुबेडा, नौरा, देबल र सिमखेतबाट आउने विद्यार्थी समयमा कहिल्यै नपुग्ने गरेको जयपृथ्वी विद्यासदनकी शिक्षिका पूजा हमालले बताइन् । लामो बाटो हिंडेर आएका विद्यार्थी थकाइले कक्षाकोठामै निदाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
पुल बगाउँदा उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल जाने बिरामीलाई पनि सकस छ । ‘पहिले छोटो बाटो भएकाले आफैं हिंडेर जाने बिरामीलाई अहिले बोकेर लैजानुपर्छ । नभए महँगो भाडा तिरेर जिप रिजर्भ गर्नुपर्छ,’ बिरामीका आफन्त मंगल खडकाले भने । साँघु बगाएपछि जिप चालकले पनि मनोमानी भाडा लिने गरेका छन् । चैनपुरदेखि जिल्ला अस्पतालसम्मको तीन किलोमिटरमा ५ सय रुपैयाँसम्म भाडा असुल्ने गरिएको गुनासोउनको छ ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख नृपराज जोशीले झोलुंगे पुल निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै ठेक्का भइसकेको जानकारी दिए । ठेकेदार कम्पनी जागृति निर्माण सेवाले झोलुंगे पुल निर्माणका लागि आवश्यक सबै सामान ल्याइसकेकाले यसै वर्षभित्र पुल सम्पन्न हुनेउनले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ १०:२३